ramkrishna December 19, 2016	यी लक्षण भए ढुक्क हुनुहोस् तपाइँलाई उनले माया गर्छिन्
महिलालाई चिन्नु असम्भव जस्तै कुरा हो । महिलाका सबै लक्षण तथा प्रतिक्रियाहरु अविश्वसनीय तथा दुर्वोध्य हुन्छन्, जसलाई खुट्याउनै सकिन्न भन्छन् मनोविज्ञहरु । त्यसोभए महिलाको भावनालाई कसरी बुझ्ने त ? कोही युवतीले आफुलाई मन पराइरहेको छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने ? मनोविज्ञहरुका अनुसार यस्ता केही लक्षणहरु छन् जसका आधारमा महिला आफुप्रति नतमस्तक भएको कुरा पुरुषले ठम्याउन सक्छन् । ती ११ लक्षण यसप्रकार छन् :
Previous Previous post: पलेटी मारेर खाना खादाको फाइदा बुझिराखौ
Next Next post: अनावस्क रुपमा रिश उठेर हैरान हुनुन्छ??? रिस नियन्त्रण गर्न अपनाउनुहोस् यी ९ उपायहरु